Ihowuliseyili Graphene ukufudumeza iliso imaski yoMvelisi kunye noMthengisi | Sheerfond
Le yimaski yokufudumeza yegraphene. Le mveliso ikakhulu kukususa ukudinwa kwamehlo kunye nokukhuthaza ukujikeleza kwegazi. Ukufudumeza kusetyenziswa izinto zegraphene. Xa izixhobo ze-graphene zifudunyezwa, zinokukhulula amaza e-infrared, anokukhuthaza igazi lomntu. Ukujikeleza, phelisa ukudinwa kwamehlo.
Le mveliso isebenzisa izifudumezi ze-graphene zokutyabeka, ezizezona zinto ziphambili zokufudumeza izixhobo, eziveliswe yinkampani yethu, kwaye inkampani yethu ineqela elitsha lophando lwezixhobo kunye neqela lophuhliso elitshintshe ishishini. Umgubo we graphene oveliswe sithi wenziwe nge graphene sheet ngetekhnoloji yethu enelungelo elilodwa lomenzi, kwaye iphepha le graphene liprintwe kwi-PI substrate, kwaye ii-electrode zenziwe kumacala omabini e-graphene.
Xa useofisini okanye usekhaya, ufuna ikhefu lesidlo sasemini, okanye ukhulule amehlo akho, unokukhetha le mveliso ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi ngokucinezela okushushu, okunokuphelisa ngokukhawuleza ukudinwa kwamehlo.
Ifuna itshaja ye-5V2A okanye ibhanki yamandla ukuyinika amandla, ekulula ukuyisebenzisa.
Le mveliso inegiya ezintathu, iqondo lobushushu ngu-30 ℃, 37 ℃ no-42 ℃, ungakhetha izixhobo ngokweemfuno zakho.
Xa uhlamba imaski yamehlo, susa into yokufudumeza kwimaski yamehlo ukukhusela into yokufudumeza kumonakalo
Imveliso inobomi benkonzo ende kwaye inokusebenza ngokuqhubekayo iiyure ezingama-5000.
Imveliso sisipho esitsha sokuyila kwaye sitshiphu, kwaye kufanelekile ngakumbi kwizipho zentengiso, izipho zeshishini, izipho phakathi kosapho kunye nabahlobo, njengezipho zoSuku loMama, isipho seKrisimesi
Umzekelo No. YZ-01
Ubungakanani beMveliso 220mm * 100mm * 10mm
ubunzima bemveliso 25g
Ubungakanani bephakheji 225mm * 105 * 24mm
Egqithileyo Isibiyeli esingenazingcingo
Okulandelayo: Isikhafu sokufudumeza saseGraphene